ပွတျသားလိုကျဖို့ တှေးပါပွီ နာကငျြလဲခဏပေါ့ – Candle Myanmar
ပွတျသားလိုကျဖို့ တှေးပါပွီ နာကငျြလဲခဏပေါ့
ကိုယျ့မှာ ဆှဲထားနရေတာ ပငျပနျးနပွေီ …. တဈနကေ့ရြငျဆိုပွီး မြှျောလငျ့နတောလေးတှဟော ဘယျနမှေ့ ဖွဈလာတော့မှာ မဟုတျမှနျး တဖွေးဖွေးလဲ နားလညျသဘောပေါကျလာပွီပေါ့ ။ အပွနျအလှနျဆိုတာ ဘယျနရောမှာမဆို လိုအပျတာပါပဲ ကိုယျကပဲ ခဈြနရေတဲ့ ဇာတျလမျးတှမှော ကိုယျကပဲ နာကငျြနရေတဲ့ အဖွဈတှကေို ရပျတနျးက ရပျပဈလိုကျဖို့ ကွိုးစားနပေါပွီ
တဈနမှေ့ာ ၂၄ နာရီ အဲ့ဒီ ၂၄ နာရီထဲမှာမှ တဈစက်ကနျ့လေးတောငျ ကိုယျက မထိုကျခဲ့တဲ့ အဖွဈတှဟော အခုမှ မဟုတျဘူး လှနျခဲ့သော ၇၃၀ ရကျတှကေတညျးက ဖုနျးဆကျရငျ မအားသေးဘူးဆိုတာက ထိပျဆုံးကလာတယျ ဘာပွောမလို့လဲ ဆိုတဲ့စကားနဲ့ ပွောစရာစကားတှကေို ပိတျပဈတယျ ငါ ဘာမြားဆကျပွောနိုငျဦးမှာလဲ … ငါဘယျလို အငျအားနဲ့ မငျးကို လှမျးလို့ပါဆိုပွီး မကျြနှာပွောငျ တိုကျနနေိုငျဦးမှာလဲ
တဈနကေ့ရြငျ နားလညျလာမှာပါ ပွနျခဈြလာမှာပါဆိုတဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြလေးနဲ့ လိုခငျြမယျထငျတဲ့အရာတှေ လိုအပျမယျထငျတဲ့အရာတှေ ဖွညျ့ဆညျးပေးခဲ့ဖူးတယျ တဈခုရဖို့ ဘယျလောကျကွိုးစားပေးခဲ့ရသလဲဆိုတာကို မမွငျခဲ့မတှခေဲ့ဘူး မြားသောအားဖွငျ့ ကိုယျ့မတ်ေတာတှေ အလာဟသ ဖွဈတာမြားတယျ အရငျဆုံး အပွဈရှာတယျ နညျးနညျးလေးတောငျ ကွညျနူးခှငျ့မပေးဘူးလေ
ActiveNow တှလေား မွငျတာပေါ့ တဈရကျမှာ ၁၂ နာရီလောကျ မီးစိမျးနတောပဲ စာတှလေားပို့တာပေါ့ ဘယျလောကျတောငျ အဖကျမလုပျခံရသလဲဆိုရငျ စာတှဝေငျနတောတှပေ့ါရဲ့နဲ့ တဈခကျြတောငျ Seen မဖွဈခဲ့ဘူး ပို့ထားတဲ့စာတှေ ဖတျခငျြမှဖတျတယျ ပွနျခငျြတဲ့အခါမှ ပွနျတယျ ခဈြသူတဲ့ တကယျဆိုလေ ကွညျကွညျနူးနူးလေးပဲ ဖွဈခငျြခဲ့တာ ။
တျောပါပွီ ဒီဆကျဆံရေးကွီးကို ရပျတနျးက ရပျပဈလိုကျဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျပွီ အခြိနျတှလေဲ မနညျးတော့ဘူးလေ ဒဏျရာတှလေဲ မနညျးတော့ သူ့စိတျနဲ့ ရှငျပွီး သူ့စိတျနဲ့ပဲ နာကငျြနရေတာက အရမျးကို မြားနပွေီလေ … သူနဲ့အတူဆိုတဲ့ အိပျမကျတှနေဲ့ ကိုယျ့အိပျမကျတှေ ဘာမှ ရှိမနခေဲ့တော့တာဟာ ကွာပွီလေ … ရပျတနျးက ရပျပွီးသှားရငျ ကိုယျ့ကိုယျကို အခြိနျတျောတျောကွာကွာ ပွနျရှာရဦးမယျ
တဈနှဈကွာရငျလဲ ကွာလိမျ့မယျ ဒါမှမဟုတျ တဈသကျလုံးကွာရငျလဲ ကွာလိမျ့မယျ ကိုယျဆကျပွီး မနာကငျြခငျြတော့တာပါပဲ ။
ပြတ်သားလိုက်ဖို့ တွေးပါပြီ နာကျင်လဲခဏပေါ့
ကိုယ့်မှာ ဆွဲထားနေရတာ ပင်ပန်းနေပြီ …. တစ်နေ့ကျရင်ဆိုပြီး မျှော်လင့်နေတာလေးတွေဟာ ဘယ်နေ့မှ ဖြစ်လာတော့မှာ မဟုတ်မှန်း တဖြေးဖြေးလဲ နားလည်သဘောပေါက်လာပြီပေါ့ ။ အပြန်အလှန်ဆိုတာ ဘယ်နေရာမှာမဆို လိုအပ်တာပါပဲ ကိုယ်ကပဲ ချစ်နေရတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေမှာ ကိုယ်ကပဲ နာကျင်နေရတဲ့ အဖြစ်တွေကို ရပ်တန်းက ရပ်ပစ်လိုက်ဖို့ ကြိုးစားနေပါပြီ
တစ်နေ့မှာ ၂၄ နာရီ အဲ့ဒီ ၂၄နာရီထဲမှာမှ တစ်စက္ကန့်လေးတောင် ကိုိယ်က မထိုက်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်တွေဟာ အခုမှ မဟုတ်ဘူး လွန်ခဲ့သော ၇၃၀ရက်တွေကတည်းက ဖုန်းဆက်ရင် မအားသေးဘူးဆိုတာက ထိပ်ဆုံးကလာတယ် ဘာပြောမလို့လဲ ဆိုတဲ့စကားနဲ့ ပြောစရာစကားတွေကို ပိတ်ပစ်တယ် ငါ ဘာများဆက်ပြောနိုင်ဦးမှာလဲ … ငါဘယ်လို အင်အားနဲ့ မင်းကို လွမ်းလို့ပါဆိုပြီး မျက်နှာပြောင် တိုက်နေနိုင်ဦးမှာလဲ
တစ်နေ့ကျရင် နားလည်လာမှာပါ ပြန်ချစ်လာမှာပါဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်လေးနဲ့ လိုချင်မယ်ထင်တဲ့အရာတွေ လိုအပ်မယ်ထင်တဲ့အရာတွေ ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ဖူးတယ် တစ်ခုရဖို့ ဘယ်လောက်ကြိုးစားပေးခဲ့ရသလဲဆိုတာကို မမြင်ခဲ့မတွေ့ခဲ့ဘူး များသောအားဖြင့် ကိုယ့်မေတ္တာတွေ အလာဟသ ဖြစ်တာများတယ် အရင်ဆုံး အပြစ်ရှာတယ် နည်းနည်းလေးတောင် ကြည်နူးခွင့်မပေးဘူးလေ
ActiveNow တွေလား မြင်တာပေါ့ တစ်ရက်မှာ ၁၂နာရီလောက် မီးစိမ်းနေတာပဲ စာတွေလားပို့တာပေါ့ ဘယ်လောက်တောင် အဖက်မလုပ်ခံရသလဲဆိုရင် စာတွေဝင်နေတာတွေ့ပါရဲ့နဲ့ တစ်ချက်တောင် Seen မဖြစ်ခဲ့ဘူး ပို့ထားတဲ့စာတွေ ဖတ်ချင်မှဖတ်တယ် ပြန်ချင်တဲ့အခါမှ ပြန်တယ် ချစ်သူတဲ့ တကယ်ဆိုလေ ကြည်ကြည်နူးနူးလေးပဲ ဖြစ်ချင်ခဲ့တာ ။
တော်ပါပြီိ ဒီဆက်ဆံရေးကြီးကို ရပ်တန်းက ရပ်ပစ်လိုက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ အချိန်တွေလဲ မနည်းတော့ဘူးလေ ဒဏ်ရာတွေလဲ မနည်းတော့ သူ့စိတ်နဲ့ ရှင်ပြီး သူ့စိတ်နဲ့ပဲ နာကျင်နေရတာက အရမ်းကို များနေပြီလေ … သူနဲ့အတူဆိုတဲ့ အိပ်မက်တွေနဲ့ ကိုယ့်အိပ်မက်တွေ ဘာမှ ရှိမနေခဲ့တော့တာဟာ ကြာပြီလေ … ရပ်တန်းက ရပ်ပြီးသွားရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အချိန်တော်တော်ကြာကြာ ပြန်ရှာရဦးမယ်
တစ်နှစ်ကြာရင်လဲ ကြာလိမ့်မယ် ဒါမှမဟုတ် တစ်သက်လုံးကြာရင်လဲ ကြာလိမ့်မယ် ကိုယ်ဆက်ပြီး မနာကျင်ချင်တော့တာပါပဲ ။
Previous: သူသငျ့ကို အရမျးလှမျးနတေယျဆိုတာ ဖျောပွနတေဲ့ သကျသေ(၆)ခကျြ
Next: ကိုယျ့ကိုယျကိုယျသာ ခဈြပါ